5 geedo laadlaad ah si loogu daro midab daaqadaha iyo balakoonka | Bezzia
Maria vazquez | 14/06/2022 12:00 | Guriga
Dhig dhirta soo laadlaadda daaqadaha Waxay si buuxda u beddeshaa wejiyada. Waxay keentaa midab iyo farxad waxayna ka dhigtaa kuwo aad u soo jiidasho leh. Waxay u baahan yihiin xoogaa naf hurid ah, laakiin yaa aan ku raaxaysanayn in uu balkoonnadaas ubaxa ka buuxo ka fakaro isaga oo ku wareegaya juqraafigayaga wakhtigan sanadka?
Waxaa jira dhir badan oo aan ku iftiimin karno balakoonnadayada guga ilaa dayrta. Si kastaba ha ahaatee, inta u dhaxaysa dhirta la dhigo waxaan helnay qaar ka mid ah kuwa aan ugu jecelnahay. Dhirta leh ubaxyo midabyo dhalaalaya oo u baahan daryeel kala duwan.
3 geranium ivy
Surfinia waa warshad bannaanka aad ugu badan sababtoo ah beerashada sahlan. Waxay ka tirsan yihiin qoyska Solanaceae ee u dhashay Koonfurta Ameerika waana mid ka mid ah noocyada ugu xoogga badan ee petunias. Astaamaha u laadlaadkooda ayaa jooga ubax u eg kuwaas oo yeelan kara midabyo kala duwan iyo sidoo kale labadaba siman iyo geesaha mawjadaha ah.
Geedkani waxa uu ka baxaa qolof iyo waa ku habboon in lagu beero dheryaha iyo beeralayda. Meesha xagaaga aad u kulushahay, waxaa la door bidayaa in la dhigo hadhka-hadhka leh, iyada oo la hubinayo ugu yaraan lix saacadood oo qorrax ah maalintii, doorbidan subaxdii. Way ku habboon tahay marka la beerayo inay ku daraan bacriminta tartiib tartiib ah ee dhirta ubaxa ee substrate-ka iyo bisha Luulyo, ka dib ubaxkooda ugu horreeya, samee manjooyin iftiin ah oo ka mid ah caleemaha ugu dheer (aan ka badnayn 20%) si ay u ilaaliyaan qaabkooda.
Calibrachoa waa nooc ka mid ah dhirta da'da ah isku qoys ah sida surfinia kaas oo soo saara, laga bilaabo guga ilaa xagaaga dambe, ubaxyo yaryar oo gambaleel ah. Dabeecad koritaankeedu waa gurguuranayaa sidaa darteed laamihiisa iyo ubaxasu way laalaadaan haddii dheri lagu beero ama dambiil lagu beero meel sare.
Calibrachoa waa geed aan dhererkiisu ka badnayn 20 cm. ubaxiisu waa yar yahay laakiin ubaxeeda aad u badan oo badan haddii ay hesho saacadaha loo baahan yahay ee qorraxda. Sida surfinia-yada, ku habboonaanta ayaa ah in ay hesho qorraxdan subaxdii oo ay ku sii jirto hadh badhkeed galabtii hore.
Sii dheecaan wanaagsan; Xad-dhaafka iyo biyo la'aanta labaduba waxay keeni karaan waxyeelo. Y isku dheji afkoda pSi loo gaaro duurka is haysta iyo ubax weyn. Ka mid ah noocyada badan, 'Million Bells' Calibrachoas waa mid ka mid ah ubaxyada ugu badan.
Ivy ama gitanilla geranium waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee midabaynta daaqadaha iyo balakoonada. Waa dhir aad u adkaysi badan, kaas oo ilaaliya ubaxiisa ilaa wakhtiga jiilaalka haddii la siiyo saacado ku filan oo qorraxdu toos ah. Waxaa lagu dhejin karaa qorraxda buuxda laakiin waxaa laga yaabaa inay ku habboon tahay in lagu sameeyo hooska-hoosaadka. Waxay u adkeysanayaan heerkulka ilaa 30º laakiin ma aha heerkul ka hooseeya 5 digrii iyada oo aan la ilaalin.
Gu'ga iyo xagaaga waa inaad si joogto ah u waraabisaa geraniums-ka, adigoo ka taxadaraya qulqulka biyaha. Inta lagu jiro wakhtigan, marka lagu daro, waxay noqon doontaa mid ku habboon in lagu daro qaar ka mid ah bacriminta dhirta ubaxa mid kasta 15 maalmood.
Daaqaddaadu miyay heshaa saacado yar oo cadceed ah? Fuchsias waa mid ka mid ah dhirta ubaxa ah ee yar ee aad ku dhejin karto dheriga iyo hooska. Waxay u baahan doonaan, haa, dhawr saacadood oo cadceed ah si ay u koraan. Saddex ayaa laga yaabaa inay ku filan yihiin. Fuchsias sidoo kale waxay taageertaa dhaxan. Marka jiilaalku yimaado waxay lumin doonaan caleemaha iyo ubaxa, laakiin waxay mar kale soo bixi doonaan guga.
Qaar ka mid ah noocyada fuchsias waa baadiyaha oo si qumman u koraan, laakiin waxaad sidoo kale arki doontaa kuwa kale oo laalaada. Substrate-ka lagu beeray waa inuu noqdaa mid aashito ah oo daloola si loo fududeeyo qulqulka. Marka la eego waraabka, tani waa inay noqotaa mid aad u badan inta lagu jiro xilliga ubaxa, sidaas darteed carradu way qoyan tahay (biyo la'aan maaha).
aphtemia waa a gurguurta succulent iyo horumar degdeg ah oo u dhashay Afrika. Caleemihiisu waa cagaar iyo hilib, inflorescenceskeeduna guud ahaan waa casaan, inkastoo ay suurtagal tahay in la helo noocyo casaan ama caddaan ah. Si fudud bay u tarmaan; kaliya goo goo goos goos ah oo si toos ah dhulka ugu dheji.
Waa geed u baahan iftiin badan, inkastoo ay u dulqaadanayso meelaha hadhka-hadhka ah. u dulqaado abaarta. inkasta oo ay si fiican u ubaxi doonto biyo badan oo joogto ah haddii la siiyo biyo-mareeno wanaagsan. Ma taageerto dhaxan joogto ah, laakiin waxay u adkeysan kartaa heerkulka ilaa -5ºC. Way ku filnaan doontaa in lagu ilaaliyo meelaha ugu qabow oo leh buste kulaylka jiilaalka si ay mar kale ugu raaxaysato guga.
Mid ka mid ah dhirta soo laalaada ee aad jeceshahay sida ugu fiican si aad u qurxiso balakoonka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » 5 geedo laadlaad ah si loogu daro midab daaqadaha iyo balakoonada